Sida loo Guba disc ah in Computer | BLOG OS-DUKAANKA
December 4, 2018 ecommerce Computer, Electronics, OS-DUKAANKA, Taageerada OSGEAR, kaydinta, Technology, buugga User 0
drives indhaha waxa ay noqonayaan in ka yar ku haboon marka ay timaado isticmaalka laakiin waxaa laga yaabaa in dad badan oo weli doonaya in ay awood u leeyihiin in ay ku shuban software ka warbaahinta jirka, ciyaaro qeexitaanka sare movie Blu-ray ah oo ay computer, listen to CD ah ama noqon in ay gubaan sawiro iyo videos in DVD ah awood. The disc Blu-ray kana soobixiya wax khibrad fiirinaya fiican marka ciyaaro on TV ama qalab kale.
qaabab kaydinta indhaha >>>
cajalid Compact (CD) ~
kaydinta disc Compact ahaa oo ka soo jeeda warbaahinta la mid ah in aan u isticmaalno for cajaladood oo is haysta audio. The celceliska boos kaydinta agagaarka 650 si ay u 700 MB xogta per disc. Waxay ku jiri kara audio, xogta ama labadaba on disc isla. software ugu badan ee kombiyuutarada loo qaybiyey on CD qaabab.
Digital oo isu cajalid (DVD) ~
DVD waxaa loogu talagalay format video ah ee isafgaradka digital in sidoo kale waxay miiqeen off galay saaxadda kaydinta xogta. DVD waxaa loo arkaa in ugu horrayn on video tan iyo Heerka noqday in loo isticmaalo si loo qaybiyo software jirka. drives DVD ayaa weli gadaal socon qaabab CD, si kastaba ha ahaatee.
Blu-ray iyo HD-DVD ahaayeen labada qaab dagaal qeexitaanka sare laakiin Blu-ray ugu danbeyn ku guuleystay baxay. Mid kasta oo ka mid ah waa awood lagu kaydiyo qeexitaanka sare calaamadaha video ama awoodaha xogta laga bilaabo heerka ugu hooseeya ee 25GB in ka badan 200GB ku xiran tirada layers on cajaladood oo ah. Ma jiraan wax HD-DVD compatibles drives dhigay mar dambe laakiin drives Blu-ray noqon doonaa socon labada DVD iyo CD.
Gubasho xogta on Mac OS >>>
Siidi by sida Apple gebi ahaanba laga saaro ka drive indhaha ka MacBook cusub iyo MacBook Air, CD-yada iyo DVD-gubanaya on Macs waxaa laga yaabaa in ay noqon wax la soo dhaafay ee ugu dhaqsiyaha badan.
Geli CD maran ama DVD aad drive Mac ee.
Laga soo bilaabo menu Action ah, dooro Finder Open. Click OK
Fur daaqad cusub Finder. CD The maran ama DVD muuqataa galeeysid ah.
Jiid oo da'a files iyo fayl gal CD ama DVD.
Marka aad diyaar u tahay in la abuuro disc ku tahay, click gubaa siduu kor ku qoran.
Gubasho CD maqal ah ee iTunes ~
From iTunes ah “file” menu, dooro “Liiska heesaha New”. Ku qor magaca ah ee playlist iyo saxaafadda galaan.
Jiid songs aad rabto in aad ka muuqan on CD galay playlist ah.
Waxaa lagu talinayaa in files asalka la dooxay si Apple sameecadda ah ama format AIFF.
Click ah “Guba CD” button hoose ee suuqa kala playlist ah.
Geli maran CD-R / CD-RW galay drive disc your computer ee. Guji “Guba CD” markale.
Gubasho ee Windows OS >>>
Tallaabooyinka soo socda waa in la buuxiyaa ka hor inta aadan bilaabin tallaabo this.
Geli CD maran galay drive disk your computer ee. Tan iyo laptops badan ha la timid booska ka dhisay-in CD, u badan tahay waxaad u baahan doontaa akhristaha CD dibadda si arrintan loo sameeyo. Windows waa in si toos ah arbushin ilaa wadahadal weydiinaya waxa aad rabto in la sameeyo disc ah.
1. Guba Data cajalid
Jiid folder aad u baahan tahay si ay u gubaan galay disc ah. Your CD waa soo tuurid marka la dhammeeyey gubanaya.
2. Guba Audio CD
Haddii aad rabto in aad ku gubi CD maqal ah, dooro Gubashada ku ah xulashada CD audio, taas oo u isticmaali doonaa Windows Media Player in samaysay shaqada. Haddii wada hadalka gujisid ah uusan ka muuqan, kaliya riix Start, Nooca ee Windows Media Player si aad u furto ka dibna riix on cajalid Blank in menu-gacanta bidix.
3. Guba Video DVD
laga yaabaa in aad rabto in aad ku gubi DVD video ah ee Windows, taas oo aad samayn karto, laakiin waxay u baahan tahay la isticmaalayo qalab kale. Haddii aad isticmaalayso Windows 7, aad si fudud u isticmaali kartaa barnaamijka Windows DVD abuuray si ay u gubaan videos in DVD. Windows 8 iyo Windows 10 saaro Windows DVD Kan sameeyey, si aad u leeyihiin in ay isticmaalaan barnaamij dhinac saddexaad sida Nero, BurnAware Free, CDBurnerXP.
Kale ku talinaynaa software >>>
Nero taageertaa audio gubanaya, HD Full video tayo leh, iyo xogta si CD, DVD, ama cajalid Blu-ray. module The Nero Gubidda ROM maamula nidaamka this. hawlgal kasta waa dareen iyo meel si degdeg ah oo loogu kalsoonaan karo qaadataa.
Nero (oo hore loogu yaqaanay Nero Muuqaal Suite) dhergiyaa baahidaada marka ay timaado videos tafatirka, audio iyo sawiro, la hawl goynta-ku laayeen qabata taabashada-ups oo gubtay aad mashruuca isla markiiba.
Available for nidaamyada hawlgalka Windows, kaaftoomi-free BurnAware Free waa barnaamij disc indhaha qoraalka in taageerooyinka CDs, DVDs, oo cajaladood Blu-ray. Waxay qabtaa isugu soo balaadhan oo ah qaabab audio iyo sidoo. Barnaamijkan oo khafiifa, laakiin functional taageertaa MP3, WMA, FLAC, AAC, regelingen, OGG, iyo M4A.
interface The nadiif ah waa u fududahay in la isticmaalo. software wuxuu taageeraa kormeerayaasha DPI sare iyo DHCP hooseeyo.
CDBurnerXP taageerada in dhawr nooc oo cajaladood oo warbaahinta indhaha gubanaya, oo ay ku jiraan DVD, CD, HD-DVD, iyo Blu-ray. Waxaad gubi karaa CD audio ama CD xogta in MP3, AAC, OGG, regelingen, FLAC, Lacy, iyo qaabab kale. CDBurnerXP lagu rakibi karo on qoraalkii ugu badan ee Windows iyo bixisaa interface user-saaxiibtinimo multilanguage a.
Waxaad ma qori kartaa xogta haddii aad xiran disc.
Dooro ikhtiyaarka ugu dhow disc ah in aad ka akhrisan kartaa file ee darawalada kale.
DVD-RAM iyo Blu-Ray karo sida darawalka qalin noqnoqda akhri
xawaaraha reading ma gaadhi karto sabab ugu sareeya ee xawaaraha ~
xawaaraha qalab drive
faahfaahinta disc iyo taageero
taageero Software The
Maqaalkani waxa uu ku talinaysaa kaliya websites, eedeymaha gaar ah ku salaysan yihiin website-ka rasmiga ah.
Hesho macluumaad dheeraad ah, Riix halkan
Sida loo ciyaaro 3D Blu Ray BD Video??
Guba Audio CD
Guba Data cajalid
Guba Video DVD
taageero darawalka Intel Software Telefoonka gacanta Graphics HD OS-DUKAANKA fasiraad sharci ah HTC Samsung Taageerada Driver Taxanaha Technology Nokia Ujeeddo Dadweynaha 64-Windows yara Model Device processor Processor processor Tababaraha qalab Technology_Internet
Qualcomm Taageerada Driver Taxanaha Technology_Internet Server Intel casriga ah Model Device Graphics HD HTC Intel Ujeeddo Dadweynaha Technology Tababaraha qalab taageero darawalka OS-DUKAANKA Processor Telefoonka gacanta Samsung Galaxy processor Samsung Nokia 64-Windows yara Sony Ericsson fasiraad sharci ah processor Software